Family Locator အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（11.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Family Locator - Children location tracker
မြေပုံကို အသုံးပြု. သင်၏ GPS tracker ၏တည်နေရာကိုခြေရာခံရန်လုံခြုံသောနည်းလမ်း။ သူတို့ကကလေးများနှင့်ကလေးတွေများအတွက်မိသားစုလင့်ခ်ကိုဖန်တီးကြသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းသည်မိသားစုနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိရန်ကူညီပေးပြီးသူမ၏ကလေးများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဇုန်ကိုဖန်တီးပေးသည်။
မိဘများနှင့်ဝေးဝေးနေသည့်ကလေးငယ်များသည်ကျောင်းသို့ သွား. ကစားနေစဉ်အတွင်းဤကိစ္စရပ်များတွင်ဝေးကွာသောကလေးငယ်များသည်ဤကိစ္စများတွင်မထိန်းချုပ်နိုင်သေးပါ Park, မိသားစုကာကွယ်ရေးနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းမှုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။
မိသားစုတည်နေရာနှင့် GPS tracker features:
> Real-Time Location:
သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတည်နေရာ tracker သည်သင့်ကလေးများသည်သင်၏ကလေးများသည်သင့်ကလေးများသည်အဘယ်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုသိရန်ကူညီနိုင်သည်။
ကလေးများနှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ပါ။ မိဘများအဘို့အမိသားစု link ကို အသုံးပြု. မိသားစုကလေးများအားလုံးသည်မိသားစု Messenger ကို အသုံးပြု. စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်သည်။
spe speed Alerts:
လုံခြုံစိတ်ချရသောဇုန်သတိပေးချက်များ - သင်၏မိသားစု0င်များကျောင်းတွင်, အိမ်တွင်သို့မဟုတ်သူတို့အနီးအနားရှိ (သို့) ဝေးသောနေရာမှဝေးဝေးနေလျှင်သို့မဟုတ်ဝေးသောနေရာတွင်ရှိနေသေးသည့်အခါ
သင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးသည်ပြaနာတစ်ခုသို့ကျသောအခါခလုတ်ကို နှိပ်. သင်၏မိဘအုပ်ထိန်းမှုအကူအညီအက်ပ်ကိုအကြောင်းကြားစာပေးပို့ပါ။